ओलाीको हटले पाटीएकता संकटमा प¥यो : प्रचण्ड - खबर प्रवाह::Khabarprawaha.com ओलाीको हटले पाटीएकता संकटमा प¥यो : प्रचण्ड - खबर प्रवाह
काठमाडौं। नेकपाभित्रको अन्तरसंघर्ष उत्कर्षमा पुगेका बेला नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले सार्थक सम्वादका लागि पहल गर्न महासचिव विष्णु पौडेलमार्फत् प्रधानमन्त्री ओलीलाई सन्देश पठाएका छन्। बिहीबार खुमलटारमा पौडेलसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले समाधानको पहल प्रधानमन्त्री ओलीले नै गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
पार्टीभित्र नेताहरुका कुरा सुन्न छोडका ओलीलाई लक्षित गर्दै प्रचण्डले अरुका कुरा सुनेर सानो नभइने बताएका हुन्। ‘तपाईंले सम्झाउनुस्, साथीहरुको कुरा पनि सुन्नुपर्छ। अरुको कुरा सुन्दैमा सानो भइँदैन। सकरात्मक निकास निकाल्ने गरी समय मिलाउन भन्नुस्। पार्टी एकता कायम राख्ने अन्तिम प्रयास गरौँ। तपाईंले पनि यहीँ तरिकाको भूमिका खेल्नुस्’ प्रचण्डले पौडेललाई भनेका थिए।
प्रचण्डले छलफलका लागि छलफल होइन, समाधानका लागि छलफल हुनुपर्ने भन्दै त्यसका लागि प्रधानमन्त्री एवं अर्का अध्यक्ष ओली तयार नभएको तर्क गरेका थिए। उनले सम्वादले समाधान दिनुपर्ने भन्दै समय गुजार्न मात्र छलफल गर्नुको अर्थ नभएको बताएका थिए। झण्डै दुई घण्टा लामो छलफलमा प्रचण्डले पौडेललाई प्रधानमन्त्री ओलीलाई साँचो समाधानका लागि पहल गर्न भनेका थिए।
प्रचण्डले पार्टीभित्रको मुख्य विवाद ओलीले नै सुरु गरेकाले निकासका लागि ओलीबाटै विकल्प आउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले भने, ‘मैले पार्टी एकताकै लागि सबै कुरा छाडेकै हो नि। मैले के गर्न बाँकी छ ? प्रधानमन्त्री बनाएकै थियो। त्यो पनि पाँच पाँच वर्ष। उहाँले अर्को एकजना साथीलाई जिम्मेवारी दिएर पाँच वर्ष सरकार चलाउँदा के हुन्थ्यो ? खाली घमण्डमात्र गर्ने र आफू निकट लगाएर विभिन्न प्रलोभनमा पार्न खोज्ने ? यो के तरिका हो ?
खुमलटारमा झण्डै दुई घन्टा छलफल गरेका महासचिव पौडेल प्रचण्डको सन्देश बोकेर बालुवाटार पुगे । उनले प्रचण्डको सन्देश सुनाएपछि ओलीले पहिले स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठक रोक्नुपर्ने नयाँ सर्त राखे। जारी स्थायी कमिटी बैठक रोकेर सचिवालमार्फत् निकास खोज्ने र महाधिवेशनमा केन्द्रित हुने ओलीले सुनाए।
ओलीले स्थायी समिति र केन्द्रीय समिति बैठकको औचित्य नभएको तर्क गरेपछि पौडेलले निकटस्थहरुसँग पार्टी एकता संकटमा परेको बताउन थालेका छन्। यद्यपि, दोस्रो पुस्ताका नेताहरु दुई अध्यक्षबीच सम्वाद गराउन पहल गरिरहेका छन्।